ह्युमर Archives - Nepali Virals
सपनाका रोचक तथ्यहरू
१७ माघ २०७४, बुधबार ११:२०
बच्चा पाएका कति दिनसम्म यौन सम्पर्क गर्न हुँदैन?
१४ माघ २०७४, आईतवार ०५:४५
मान्छेकै मासु खाने डरलाग्दा अघोरी नागा बाबा
९ माघ २०७४, मंगलवार १४:१०
विश्वकै यस्तो गाउँ, जहाँ बस्छन् आइमाई लोग्नेमान्छे सबै नाङ्गै
७ माघ २०७४, आईतवार १३:२६
खाना खाने वित्तिकै गर्न नहुने ५ काम
१० बैशाख २०७३, शुक्रबार १०:०१
कपाल रोपेका बलिउडका ८ चर्चित नायक
७ बैशाख २०७३, मंगलवार ११:०१
बिर्सेर पनि फ्रिजमा राख्न नहुने १२ खानेकुरा
२८ चैत्र २०७२, आईतवार ०९:११
महिलाको कुन अंगमा के लुकेको हुन्छ ?
२४ चैत्र २०७२, बुधबार १३:५०
‘सेक्स’ होइन ‘डिजाइन’ गरेर चाहे अनुसार बच्चा पाउन सकिने
२२ चैत्र २०७२, सोमबार १५:१७
अहिले सम्मकै झुर १५ सेल्फी
२४ फाल्गुन २०७२, सोमबार १०:४३
चुइंगमका १० बिचित्र कहानी
११ फाल्गुन २०७२, मंगलवार १२:००
तनाव भगाउने ३५ फोटो जसले पेट मिचिमिची हँसाउछ
८ फाल्गुन २०७२, शनिबार ११:५२
किन एकाएक भाइरल बन्यो यो भिडियो ? हेरेपछि हाँसो थाम्नै गाह्रो !
३ फाल्गुन २०७२, सोमबार ०८:३३
जान्नुहोस् महिलाका ९ अनौठा कुरा
७ माघ २०७२, बिहीबार १४:०२
Beautiful girls pretending they know city guy
२८ मंसिर २०७२, सोमबार ०७:४१
‘Save Water’ girl asked after taking off her dress
२८ आश्विन २०७२, बिहीबार १४:१४
२४ फाल्गुन २०७२, सोमबार १०:४३	2,607
पछिल्लो समय सेल्फीको क्रेज यति धेरै बढ्दो छ कि सेल्फी नखिचने सायदै होलान । फोटो भन्ने बितिक्कै सेल्फी भन्ने जमाना आइ सक्यो । सानी नानीदेखि नानीकी ममी समेत सेल्फीमै रमाउन थालेका छन् । त्यसो त राम्रो मात्रै होइन जे जस्तो सुकै अबस्थामा पनि सेल्फी खिच्न माहिर हुनेहरुको समेत कुनै कमि छैन । यसले राम्रो भन्दा पनि नराम्रो असर पार्ने गरेको छ । तसर्थ यस्ता आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा ठेस लाग्ने खालका सेल्फीहरु सकभर नखिचेकै राम्रो । खिची हालियो भने पनि आफुले हेर्ने बितिक्कै डिलिट गर्दा राम्रो । हेर्नुहोस् यी १५ सेल्फी जसमध्ये कुनै देख्ने बितिकै हासो उठ्छ भने कुनै देख्ने बितिकै हैट ! भन्नु हुनेछ । सेल्फी खिच्ने मध्ये केहीले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सेल्फी खिच्ने गर्छन । तर अनायास त्यस्ता सेल्फी सार्वजनिक भैदिन्छ र त अप्ठेरो पर्छ । आफैले मात्रै हेर्नका लागि खिचिएका सेल्फीहरु इन्टरनेटको संजालमा फैलिदा त्यसले भाइरल रुप लिने गर्छ । यसले फोटो खिच्ने मान्छेलाई त नराम्रो बनाउछ नै साथै फोटो हेर्नेलाई समेत अप्ठेरोमा पार्छ ।
११ फाल्गुन २०७२, मंगलवार १२:००	1,512
बालकदेखि बृद्धसम्म सबैलाई उत्तिकै मन पर्ने चुइंगम युवायुवतीहरुका लागि त झन् फेसन नै बन्ने गरेको छ । त्यसो त बजारमा यसका स्वाद, मूल्य र आकारमा बिभिन्न भेराइटीहरु उपलब्ध छन् । नेपालमा मात्रै होइन बिश्वभर यसको क्रेज बढ्दो छ । कतिपयले यसलाई फेसनका रुपमा प्रयोग गर्ने गर्छन भने कतिपयले स्वाद र मुख गान्हाउने समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि चपाउने गरिन्छ । कोही कोहीलाई त यो नशा नै बन्ने गरेको छ । सधै खाने गरिए पनि यसका बिचित्र कहानीहरुका बारेमा भने कमैलाई मात्र जानकारी होला । जुन थाहा पाएर तपाई आश्चर्यचकित पर्नु हुनेछ । पढ्नुहोस्....
८ फाल्गुन २०७२, शनिबार ११:५२	835
व्यस्त दैनिकी अनि ब्यबहारिक जीवनको ब्यबस्थापन । यसले गर्दा मानिसहरु थकान र तनावमा छन् । मूडफ्रेस र रमाईलो गर्ने त टाढाको कुरा, परिवारसँग बस्ने समय समेत मिलाउन हम्मेहम्मे पर्छ कतिपयलाई । जहिले पनि जति खेर पनि काम काम अनि काम । यसले हामी एकखाले मेशिन नै बनिसकेका छौ । के तपाई पनि यस्तै व्यस्तता र अनेक समस्याका कारण तनावमा हुनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने यी ३५ फोटो हेर्नुहोस् जसले तपाइको तनाव हटाएर पेट मिची हाँस्न बाध्य पार्छ ।
३ फाल्गुन २०७२, सोमबार ०८:३३	696
बच्चा स्याहार्नु जस्तो झन्झटिलो र गाह्रो काम सायदै होलान् । तर यो जसले भोगेको छ उसैलाई मात्र थाहा हुन्छ । एक जना बच्चा हुर्केपछि हाइसन्चो महशुस गर्छन हरेक आमा । अब कल्पना गर्नुहोस् जुम्ल्याहा अथवा तिम्ल्याहा बच्चा जन्मियो भने कसरी हुर्काउने ? प्रश्न सुन्दै कतिको टाउको दुख्यो होला किनकी यो स्वभाबिक पनि हो । अझ बुबाहरु त बालबच्चा भनेपछि टाउको कन्याउछन् । हेर्नुहोस् यी दुई भिडियो जुन तपाईको हाँसोको आँसु झर्छ ।
७ माघ २०७२, बिहीबार १४:०२	1,904
तपाइँले तपाइँको गर्लफ्रेण्ड वा श्रीमतीलाई राम्रोसँग चिन्नु नै भएको छैन भनेर कसैले भन्यो भने तपाइँ हामी जो कोही पनि त्यो मानिससँग झगडा गर्न तम्सन्छौं। तर साँच्ची के हामीले हाम्रा श्रीमती, गर्लफ्रेण्ड वा साथी जो महिला छन् उनीहरुलाई भित्रै देखी चिनेका जानेका छौं त? यो यतिखेरको अहम सबाल हो। हामीले जत्ति नै चिनेको नजिकको भने तापनि महिलालाई चिनेका छैनौं। यहाँ चिन्ने भन्न खोजेको हो स्वभाव, प्रवृत्ति अनि आनिबानीको कुरा। प्रकृतिले नै मानिसमा भेद गरेको छ महिला र पुरुषका सोच्ने शैली देखी आनिबानी जन्मँदा देखी नै फरक खालको भएर आएको हुन्छ। नारी अधिकार भनेर एनजिओ आइएनजिओको पैसामा र्सार्वजनिक मञ्चमा जत्ति नै कुर्लिए पनि महिला अधिकारवादी महिलाहरुको स्वभाव पनि उही हो भलै उनीहरु बाहिर नदेखिओस भनेर धेरै नै अभिनय गर्दछन्। आखिर दामको सबाल जो छ। तर पनि महिलामा पुरुषले हेर्दा र महशुस गर्दा यस्ता अनेकौं चाखलाग्दो र अनौठो स्वभाव हुन्छ त्यसको बयान सामान्य मानिसले गर्न पनि सक्दैन। लामो समय देखी महिलाका बारेमा यस्ता अनौठा प्रसंगका बारेमा चर्चा हुँदै आएको छ। महिलाहरु बुझी नसक्नुका हुन्छन । मुख हेरेर चिन्नु त असम्भब भैहाल्यो जिन्दगी भर संगै बिताएकाले पनि महिलाका बारेमा सबै कुरा जान्न बुझ्न सक्दैनन् । त्यसो त कतिपय पुरुष साहित्यकारले महिलालाई कहिल्यै पनि चिन्न नसकिने ब्यक्तित्वको रुपमा अर्थ्याएका छन् । एक साहित्यकारले त ‘वुमन इज फरेनल्याण्ड’ अर्थात महिला भनेको विदेशी भूमी हो समेत भनेका छन् । हामीले यहाँ महिलाको बारेमा लामो अनुसन्धानपछि पत्ता लागेका ९ चाखलाग्दो तथ्यहरु प्रस्तुत गरेका छौ ।
२८ मंसिर २०७२, सोमबार ०७:४१	619
If two beautiful girls came to you and asked for date and claim you have love affair with one of them what you will do? It’s very amazing experience not only for you for all boys in this world.
२८ आश्विन २०७२, बिहीबार १४:१४	752
A girl enters in bathroom, turns on the water tap and takes her dresses off. She is going to take shower.... all her activities inside bathroom is captured inavideo camera...
Whenaboy attacked with axe
२३ भाद्र २०७२, बुधबार १३:४६	354
Think if you are on your way and one boy comes with an axe toward to attack you...what will happen to you ...can you imagine? obviously not....watch this video which shows you what happen when someone approach to attack you with such sharps...
I Love You – New Year Proposal
१ भाद्र २०७२, मंगलवार १०:५४	306
A boy proposes girls on public are wishing new year ..... Nepali Prank video
Stairs on Sky
३२ श्रावण २०७२, सोमबार ०८:२५	250
Chinese made stairway on sky to heaven by fireworks ...
भरखरै अपडेट भएका
Copyright © 2015 - NepaliVirals. All rights reserved.